Asụsụ Bekee maka ndị gbara ọsọ ndụ, Asleyes, SIV, na ndị o metụtara ire ahia - Ọzụzụ Agụmakwụkwọ Asụsụ
bekee maka ndị gbara ọsọ ndụ
Bekee maka ndị gbara ọsọ ndụ, Asylees, SIV, na ndị na-agba ọsọ ahia
Banyere BeI RSS nke Ngalaba
Agaghị akwụ ụgwọ klas maka ụmụ akwụkwọ ruru eru
Nkwado Asụsụ (Spanish, Arabic, French, Farsi, Pashto, Swahili, Turkish)
Ọrụ Nkwado dị
Ozi Ntuziaka nye ndị mmekọ anyị
Mgbakwunye Ngalaba Ndị Gbara Ọsọ Ndụ
Ụlọ akwụkwọ mmụta asụsụ abụọ (BEI) na-ejere ụmụ akwụkwọ gbara ọsọ ndụ na ndị kwabatara afọ 40 ozi. N'ime afọ iri atọ gara aga, BEI enyela ọtụtụ puku ndị kwabatara ọhụrụ, ndị gbara ọsọ ndụ, ndị mgbapụ, ndị na-azụ ahịa, na ndị ọbịa si mba ofesi na-anọchite anya ọkwa ọha, agụmakwụkwọ, agbụrụ na akụ na ụba ESL klas. BEI na-enye ụmụ akwụkwọ anyị nkuzi dị mma, na-akpali ha imezu na agụmakwụkwọ, azụmahịa, na obodo zuru ụwa ọnụ na mpaghara. Mmezu ndị a rụpụtara na mpaghara ndị a na-enye ụmụ akwụkwọ anyị ike mmụta asụsụ ma mee ka ha nwee ike igosipụta ọganihu na ikike asụsụ ha. BEI nwere ahụmahụ n'ịkụzi Bekee n'ụzọ dị iche iche: Basic Literacy, ESL, Intensive English Program, Njikere Ọrụ, na Ebe Ọrụ ESL gụnyere ma ọ bụghị nanị na nchekwa na ọrụ metụtara ikwu okwu na ọmụmụ okwu. Klas anyị metụtara ọrụ ejirila ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche rụọ ọrụ: ọrụ nri, ụlọ nri, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mmepụta ihe, na mkpuchi ọkụ na oyi. BEI bụ akụkụ nke Consortium Houston Refugee Consortium nke ndị na-enye ọrụ ndị gbara ọsọ ndụ bụ ndị na-arụkọ ọrụ na mmekorita kemgbe afọ 15 gara aga. Ndị otu ụlọ ọrụ na-emekọ ihe na-ekekọrịta ego steeti dị ka RSS, TAG, na TAD na mbọ iji nye ndị gbara ọsọ ndụ ebigharịrị na Houston nke ọma na ọrụ zuru oke. N'ime afọ 10 gara aga, BEI abụrụla onye ọrụ nkwekọrịta mbụ maka Mmemme Ọrụ Mmụta RSS niile ma nwee ahụmịhe dị ukwuu na ọzụzụ, nyocha, na nlekota mmemme na nnabata mmefu ego iji hụ na nsonaazụ na-aga nke ọma nke mmemme mmekọ.
N'afọ 1988, BEI bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ nzuzo ole na ole dị na Texas nyere ikike nke US Immigration and Naturalization Service ka ọ kuziere ndị mbịarambịa nwere iwu ọhụrụ bụ ndị natara mgbaghara na mpaghara Houston. Na 1991, BEI ghọrọ onye na-arụkọ ọrụ ọnụ na Houston Community College System na-enye ESL (ọkwa 1, 2 & 3) nke National Literacy Act (NLA) kwadoro nke 1991, PL 102-73. Na 1992, BEI nwetara onyinye mgbasa ozi site na Mgbasa Ozi Gọvanọ megide ịkpa oke ọrụ, nke BEI nwetara nkwanye ugwu pụtara ìhè n'aka Gọvanọ maka ọrụ enyere. Site na 1995 ruo 1997, BEI nyere ụmụ akwụkwọ, ndị ọtụtụ n'ime ha bụ ndị gbara ọsọ ndụ, Ọzụzụ nchịkwa Office Bilingual. Ihe omume a bụ JTPA Title II-A, II-C/ Houston Works kwadoro mmemme a. Na 1996, BEI nwetara onyinye maka Texas Citizenship Initiative (Citizenship Outreach) site na TDHS, Office of Immigration and Refugee Affairs. BEI na-eje ozi mkpa mmụta nke ndị gbara ọsọ ndụ na Harris County kemgbe 1991, site na onyinye RSS, TAG na TAD sitere na TDHS, a maara taa dị ka HHSC.
Ulo akwukwo mmuta asusu abuo
Schoollọ Akwụkwọ Asụsụ
6060 Richmond Okporo ụzọ,
Gini mere BEI?
Nzere ntozu & ndi otu
Nkagbu na nkwụghachi iwu
Iwu Ndi ozo
Jikere Maka Citizensbụ Amaala
Copyright 2022 Bilingual Education Institute